Hindiya oo ka laabatay casnhuurta waxyaabaha ay dumarka nadaafaddooda ku ilaashadaan - BBC News Somali
Hindiya oo ka laabatay casnhuurta waxyaabaha ay dumarka nadaafaddooda ku ilaashadaan
Image caption Canshuurta 12% waxay sababtay in dalka India oo dhan laga mudaharaado
Dowladda Hindiya ayaa sanadki hore casnhuur 12% ah ku soo rogtay suufka ay haweenka isticmaalaan xilliga caadada ka noqotay olole ballaadhan oo bilooyin socday kaddib.
Go'aankan dowladda ayaa wuxuu soo baxay sanad kaddib marki ay dowladdu sheegtay canshuurta cusub ee ay ku soo rogtay alaabada loo yaqaanno GST oo ay dumarka nadaafaddooda ku ilaashadaan xilliga caadada ay ku dhacdo.
Dadka ololaha u galay in la qaado canshuurtan ayaa waxay sheegeen iney dhib ku tahay dumarka dalka oo dhan oo ay keeneyso canbshuurta la kordhiyey iney dumarka awoodi waayaan iney soo iibsadaan wixi nadafaddooda daruuriga u ahaa.
Go'aanka dowladda waxaa si weyn u soo dhaweeyey kooxaha bilooyinka ololaha soo waday.
Surbih Singh oo ah aasaasaha, hay'ad samafal oo ka shaqeeyso caafimaadka haweenka ee xilliga ay caadada ku dhacdo ayaa waxar Thomson Reuters Foundation u sheegtay "tallaabada ay dowladdu qaadday iney bogaadinayaan ayna tahay mid ay sugayeen taasoo gabdhaha ka caawineyso iney waxbarashada, shaqooyinka joojinin xilliga caadada ku dhacdo, ayna fursad ay caafimaadkooda ku ilaashadaan helaan"
Caadada gabdhaha ku dhacda ayaa waxay qayb ka tahay sababaha ugu waaweyn ee ay gabdhaha dalka Indiya waxbarashada uga tagaan, maadaamaa ay awoodin iney helaan wixi ay nadafaddooda ku ilaashan lahaayeen taana ay ku qasabto iney guriyahooda joogaan oo ay soo bixin.
Dad ka badan 400,000 oo qof ayaa saxiixooda ku muujiyey sida ay go'aanka dowladda uga soo horjeedaan waxayna taa fududeysay in ay dowladda ka noqota go'aankeeda.
Canshuurtan 12% ee ay dowladdu soo saartay afka hindiga waxaa loogu magac daray Lahu ka Lagaan oo uu micnaheedu yahay "canshuurta dhiigga"
Amar Tulsiyan oo ka mid ah dadka sida weyn uga ololeeyey arrintan ayaa waxay go'aanka ay dowladdu canshuurta kaga noqotay ku sheegtay "guul dhammaan shacabka India u soo hoyatay"
Muuqaal Indian campaigners protest over sanitary pad and tampon tax